I-china Abakhiqizi be-Acid 3-Methyl-2-Nitrobenzoic Acid nabaphakeli | SINGNUO
Igama lomkhiqizo: I-3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Inombolo ye-CAS: 5437-38-7
Ukuhlanzeka: 99.0% min
Ukubukeka: I-powder emhlophe emhlophe, i-White Crystalline Powder
Iphakheji: 25KG / Drum, noma njengoba iphakethe egcizelele
Indawo Yomsuka: I-Anhui, China
Igama I-3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Omqondofana I-2-Nitro-m-toluic acid ； 2-Nitro-3-Methyl benzoic acid ；
Ukuhlanzeka > = 99%
Ifomula Yamamolekhula C8H6NO4
Isisindo Semolekyuli 180.1381
Ukubukeka I-powder emhlophe emhlophe, i-White Crystalline Powder
Ubuningi 1.4283 (ukulinganisela okunzima)
Indawo Yokuncibilika 219-223 ℃ (kuvuliwe.)
Indawo yokubilisa 340 ° C ku-760 mmHg
I-Flash Point 153.4 ° C
Ukuncibilika kwamanzi <0.1 g / 100 mL ngo-22 ℃
25KG / Drum, noma njengoba iphakethe egcizelele.
Izinyathelo zokuphepha zokuphatha ngokuphepha
Gwema ukuthintana nesikhumba namehlo. Gwema ukwakheka kothuli nama-aerosol. Nikeza umoya opholile ofanele ezindaweni lapho kwakhiwa khona uthuli Izindlela ezijwayelekile zokuvikela umlilo.
2 Imibandela yesitoreji esiphephile, kufaka phakathi noma yikuphi ukungahambisani
Gcina endaweni epholile. Gcina isitsha esivaliwe sivalekile endaweni eyomile futhi enomoya omuhle.
Izinsiza kusebenza zokuzivikela
Ukuvikelwa kweso / ubuso
Izibuko zokuphepha ezinezihlangu eziseceleni ezihambisana ne-EN166 Sebenzisa imishini yokuvikela iso evivinywa futhi yamukelwa ngaphansi kwamazinga kahulumeni afanele njenge-NIOSH (US) noma i-EN 166 (EU).
Yiphathe ngamagilavu. Amagilavu ​​kufanele ahlolwe ngaphambi kokusetshenziswa. Sebenzisa inqubo efanele yokususa igilavu ​​(ngaphandle kokuthinta indawo engaphandle yeglavu) ukugwema ukuxhumana kwesikhumba nalo mkhiqizo. Lahla amagilavu ​​angcolile ngemuva kokusetshenziswa ngokuhambisana nemithetho esebenzayo kanye nemikhuba emihle yaselebhu. Geza bese womisa izandla. Amagilavu ​​avikelayo akhethiwe kufanele anelise imininingwane ye-Regulation (EU) 2016/425 kanye ne-EN 374 ejwayelekile etholwe kuyo.
Izembatho ezingenamikhono, Uhlobo lwezinto zokuvikela kumele lukhethwe ngokuya ngobuningi kanye nenani lezinto eziyingozi endaweni ethile yokusebenza.
Ngokuchayeka kwenkathazo sebenzisa uhlobo P95 (US) noma thayipha umshini wokuphefumula wezinhlayiyana ze-P1 (EU EN 143) .Ukuze uvikele izinga eliphakeme sebenzisa uhlobo lwe-OV / AG / P99 (US) noma uthayiphe amakhadibhodi okuphefumula e-ABEK-P2 (EU EN 143). Sebenzisa imishini yokuphefumula nezakhi ezihloliwe futhi zamukelwa ngaphansi kwamazinga afanele kahulumeni afana ne-NIOSH (US) noma i-CEN (EU).
Ukulawulwa kokuchayeka kwemvelo
Ungavumeli umkhiqizo ungene emseleni.
Langaphambilini I-2-Methyl-4-Nitrobenzoic Acid
Olandelayo: I-3-Methyl-4-Nitrobenzoic Acid
I-2-Methyl-3-Nitrobenzoic Acid, O-Toluoyl Chloride, I-Potassium Sulfate, I-N, N-Diethyl-3-Methylbenzamide, I-2-Methyl-4-Nitrobenzoic Acid, I-2-Methylbenzoic Acid,